China abantwana PU Raincoat mveliso kunye nabenzi | Senlai
1. Enye yeemveliso zethu eziphambili yingubo yemvula ye-PU, ikakhulu ethunyelwa kumazwe ase-Nordic, e-Oceania nakweminye imimandla. Iidyasi zabantwana zahlulwe zayinto enye nesuti kunye neesuti. Kukho ezityebileyo nezincinci.
2. Iimpawu zelaphu loboya nazo zibaluleke kakhulu. Emva kochungechunge lokulungiswa, ukuthungwa kucacile, ukuqaqamba okuhle, akukho lula ukwenzeka kwepilisi, ilahleko yeenwele njalo njalo. Ngokubanzi emva konyango olukhethekileyo, i-fleecy inokulwa -Static, nekudodobalisa idangatye kunye nezinye iimpawu, ukwenza ukhuseleko kwelaphu ngcono kakhulu.Shake uboya ilaphu ingadityaniswa naliphi na ilaphu, le ntsebenzo ingaphucula kakhulu ubushushu bayo kunye neminye imisebenzi.ukushukumisa ilaphu yoboya iziva ithambe kakhulu. Ukongeza, inokwenza iipateni ezahlukeneyo ngokweemfuno ezahlukeneyo zabantu.
Umbala unokutyeba kwaye unemibala, kwaye yendalo ngakumbi kwaye igudile.Uhlobo olucekeceke lwenziwe nge-PU kunye nelaphu lesiseko. Isiseko selaphu singenziwa ngelaphu lomthengisi elichazwe ngumthengi.
Zimbini iintlobo zeesuti, enye ibhatyi kunye nezixhaso ezixhonyiweyo, enye ibhatyi kunye neebhulukhwe ezinqeni. Ibhulukhwe ye-brace kukusebenzisa indlela i-brace buckle eya kuba ne-brace elastic brace root buckle kwindawo egxalabeni lomzimba womntu, Kulula ukunxiba.Ibhulukhwe esinqeni ethe tyaba usebenzisa indawo esinqeni yengcambu yerabha yelastiki, ilastiki efanayo.
5. Indlela yokuvala idyasi esemlonyeni wonyawo ubukhulu becala isebenzisa uziphu wombala, onokuthi wonke wenziwe ngezinto ezingangeni manzi ukuqinisekisa umsebenzi wempahla ngexesha leemvula nexesha lemvula.
6.Izinto eziluncedo zelaphu le-PU zezi: ubukhulu becala zenziwe nge-elastic fiber edityanisiweyo, kunye neempawu ezifanayo zesikhumba; ngaxeshanye, ubunzima obunzima, ukomelela okuqinileyo, ukuphefumla, ukungangeni manzi, akukho lula ukukhulisa kunye nokukhuselwa kwendalo, iipropathi ezilungileyo zomzimba, ukuxhathisa ukujija nokujika, ukuthamba, ukuqina, ngokungena komoya.
Egqithileyo Ingxowa yokulala yabantwana
Okulandelayo: Isuti yabantwana
Abantwana baCoca iDyasi
Abantwana Imvula ende
Isikolo semvula sabantwana